Umgaqo-nkqubo weNtengiso - iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Umgaqo-nkqubo woKhuseleko loMmandla
Kwimakethi yentsimbi yezixhobo, zininzi iimveliso zase-Italiya eziya kwiimveliso eziphezulu kumgangatho kunye nakumaxabiso. Nangona kunjalo, ayingabo bonke abathengi abanokwamkela amaxabiso aphezulu kangaka. Ke ngoko, i-YALIS lukhetho lwakho olunemveliso ephezulu kodwa amaxabiso asezantsi xa kuthelekiswa neemarike zokwenza izixhobo zeminyango zaseYurophu. Xa usakha ubudlelwane bokusebenzisana ne-YALIS, sikhusela intengiso yakho yendawo yakho. Inkampani yakho ichongiwe njengomhambisi we-YALIS endaweni yakho.
I-YALIS isebenza ngokusondeleyo nabasasazi bethu ukubonelela ngeenkonzo zobungcali kuyilo olwenziweyo lwemveliso, ukukhuthaza uphawu, kunye nophuhliso lweshishini. Ngokusekwe kwintengiso yasekhaya, i-YALIS ibonelela ngezicwangciso ezisebenzayo kubasasazi bethu ukuze bathengise iimpahla kubathengi babo kakuhle. Isicwangciso-qhinga ngokubanzi nesigqeba seshishini kukunceda ukuvula indlela yentsebenziswano yeshishini kwixa elizayo kwinqanaba lamazwe onke ukuze kuzuze amashishini kunye nesebe.
UMgaqo-nkqubo woKhuseleko lweMveliso
Ngeemveliso ezenziwe ngokwezifiso, i-YALIS ikhusela iimveliso zakho. Siyazikhusela iimveliso zakho zokukhuphisana kunye nezohlukileyo kwintengiso, ngekontraki asizukuthengisa iimveliso zakho kubo nabaphi na abanye abathengi.
1. Inkxaso yokwazisa: Siyila izisombululo zoqobo ezihambelana neemfuno ezithile zabathengi bethu. Ukubonelela ngezixhobo zokuthengisa kunye nezixhobo zokwazisa kwakho. Njengeziboniso zentengiso, ibhodi yokubonisa, iikhabhathi zokubonisa, iincwadana ezinemifanekiso, njl.
2. Igumbi lokubonisa kunye noYilo lweMiboniso: I-YALIS iyavuya ukubonelela ngegumbi lokubonisa / umboniso loyilo kunye nezixazululo zezinto zentengiso ezenziwe ngezixhobo kwiiarhente zethu / abasasazi. Ukuhamba ngonxibelelwano olunzulu kunye nokuqonda iimfuno ezivela kubathengi bethu, igumbi lokubonisa elonelisayo elinikezelwe kuwe.
3. Ukuxhaswa kweemveliso ezintsha: Iimveliso ezintsha ziya kukhuthazwa kwiarhente / kubasasazi bethu kwangaphambili, nto leyo ekwenza uzive uyolo lokuba yiVIP, ngaphandle nje komsebenzi.
1. Ngamajelo athile okusasaza iimveliso zekhompyutha kwimarike yeli, kunye neentengiso / iivenkile / iinethiwekhi ezifanelekileyo;
2. Iiarhente zebranti / abasasazi;
3. Zimele kwimarike yeli: kunye neentengiso zabo, ukuthenga, amaqela okuthengisa; indawo yokugcina izinto; unokuwenza ngokuzimeleyo umsebenzi wokuthengisa kunye nokwazisa;
4. Iiarhente zengingqi zeYALIS: ezinamava kwizixhobo zokwakha / kwishishini lezixhobo zentsimbi, ukuqondwa okuphezulu kunye nokuqonda kwesicwangciso sobuchule sophawu lweYALIS.